गुल्मीका शिक्षकलाई कोरोना पहाडबाट सर्‍यो कि तराईबाट ? – Khabar Silo
गुल्मीका शिक्षकलाई कोरोना पहाडबाट सर्‍यो कि तराईबाट ?
८ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा ४४४ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको संक्रमणको स्रोत नै पत्ता लगाउन सरकारले सकेको छैन ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कन्ट्याक ट्रेसिङको जिम्मा लिए पनि केही ठाउँको संक्रमण स्रोत पत्ता लगाउन नसकिएको बताएको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी सुत्केरी महिलाको मृत्यु । त्यस्तै रुपन्देहीको मणिग्रामस्थित अस्पतालमा भर्ना भएका गुल्मी मदानेका शिक्षकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो, तर संक्रमणको स्रोत पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
निमावि स्कुलका प्रधानाध्यापक उनी जेठ १ गते अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनको शुरुदेखि नै आईसीयू कक्षमा भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भएको थियो । कोरोना शंकास्पद देखिएपछि जेठ २ गते उनको स्वाब निकालेर पीसीआर टेस्टका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । सोमबार आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो ।
ट्राभल हिस्ट्री गुल्मीदेखि अर्घाखाँची हुँदै रुपन्देहीसम्म
लकडाउनका कारण विद्यालय पनि बन्द भएकाले गाउँमै बसिरहेका शिक्षकमा कसरी कोरोना संक्रमण भयो भनेर गाउँवासी अचम्ममा परेका छन् ।
‘आफ्नो टोलबाट बाहिर कतै जानुभएको थिएन, भारततिरबाट आएकासँग पनि भेटघाट–सम्पर्क भएको थाहा छैन’ संक्रमित शिक्षकका भाइ भन्छन्, ‘दाइलाई कोरोना देखियो भन्दा अचम्म लागेको छ ।’
रुपन्देहीको बुटवल क्षेत्रमै प्रादेशिक अस्पताल हुँदाहुँदै देहातको क्रिमसन अस्पतालमै उनलाई किन लगियो भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ । त्यो भन्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ उनमा कोरोना भाइरस कहाँ र कोबाट सर्‍यो भन्ने अझै पत्ता लागिसकेको छैन ।
क्रिमसनमा भर्ना हुनुभन्दा एकहप्ता पहिले उनमा ज्वरो देखिएको थियो । उनले गाउँकै पुर्कोट दहस्थित मदाने पोलिक्लिनिकमा चेकजाँच गराएका थिए । त्यहाँ उनलाई स्वास्थ्यकर्मी विष्णु भुसालले टाइफाइडको औषधी दिएका थिए । भुसाल मदाने गाउँपालिका अन्तर्गतको म्यालपोखरी स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।
औषधि खाएपछि उनलाई दुई दिन जति ठीक भएको थियो । तर, बैसाख ३० गते रातिदेखि वान्ता भएपछि जेठ १ गते फेरि सोही क्लिनिकमा जाँदा जण्डिस भएको भन्दै अन्यत्र लैजान रिफर गरिएको थिए ।
सोही दिन स्थानीय व्यवसायी भोजराज भट्टराईले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित छायाँ पोलिक्लिनिकमा पुर्‍याएका थिए । त्यहाँका डाक्टरले चेकजाँच गरेपछि विरामीलाई मणिग्रामको क्रिमसन अस्पताल लैजान रिफर गरिएको थियो ।
दुई दिनसम्म आईसीयूमा राख्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि भेन्टिलेटरमा सारिएको थियो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनमा एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम, निमोनिया र मुटुको समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रहरीले आज पनि पसल खोल्न दिएन, व्यापारी भन्छन्– सरकारलाई तालाचाबी बुझाउँछौं
२८ जेठ, काठमाडौं । न्यूरोड क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई पसल खोल्न बुधबार पनि प्रहरीले रोक लगाएको छ । तीनदेखि खुल्ला हुँदै आएका न्यूरोड क्षेत्रका पसलहरु मंगलबार प्रहरीले एक्कासी बन्द गराएको थियो ।तर व्यापारीहरुले बुधबार पनि पसल खोल्ने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणाअनुसार बिहानै पसल खोल्न गएका व्यापारीहरुलाई प्रहरीहरुले रोकेका छन् । बुधबार बिहान अघिल्लो दिनजस्तो प्रहरी […]
बिनय जंग बस्नेत जेल बाट रिहा भए।। भन्छन् सत्यको जित भो ;मैले केही गल्ती गरेको थिएन( भिडियो सहित)
यो समाचारको भिडियो अन्तिममा छ कृपया पुरा हेरि प्रतिक्रिया दिनुहोला बिनय जंग बस्नेत भर्खरै धरौटीमा रिहा भएका छन । रिहा भए संगै खुसी हुँदै भने न्याय मरेको रहिनछ गर्दै नगरेको गल्तिको सजाय भोगे।। उनलाई जेल बाट रिहा भएपछि फुलमालाले स्वागत गरिएको छ।। रिहाई हुँदा पुन्य गौतमको पनि उपस्तिथि थियो।।। हिजो ५ लाख जरिवाना र १ […]
१६ असार, काठमाडौं । नेपालका विभिन्न २४ जिल्लामा सलह भेटिएको छ । मंगलबार बिहान १२ बजेसम्म २४ जिल्लामा सलह रहेको प्लान्ट क्वरिन्टिन तथा विषदी व्यवस्थापन केन्द्र अन्र्तगतको सलस सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सलहले मकै, धान, केरा खेतीमा क्षति पुर्‍याएको केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए । क्षतिको अनुमान नभइसके पनि प्रारम्भिक रुपमा बालीहरुमा सलहले […]
‘अहिले स्कुलले शुल्क मागे नतिर्नू’